သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် လက်တွဲကြရန် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် ပြော | ဧရာဝတီ
ကျော်ခ| February 8, 2013 | Hits:24,490
8 | | ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) တောင်းပိုင်း ဗဟိုဌာနချုပ် လွယ်တိုင်းလျန်၌ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့က ကျင်းပသော ၆၆ နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့က ဖော်ဆောင်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို လက်တွဲပူးပေါင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်အား တည်ထောင်သွားကြရန် အားလုံးကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်း ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ (RCSS) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
အစိုးရက လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနှင့် ပါတီတိုင်းအား နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရန် ကြိုဆို ကမ်းလှမ်းလာပြီ ဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံရေး ပြဿနာများအား ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကာ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် စည်းလုံးညီညွှတ်စွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြရန် အချိန်အခါကောင်းဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) တောင်းပိုင်း ဗဟိုဌာနချုပ် လွယ်တိုင်းလျန်၌ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့က ကျင်းပသော ၆၆ နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်း ပြောဆိုသွားသည်။
“သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့၏ စေတနာများကို ဂုဏ်ယူ အသိအမှတ်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ အခြေအနေတွင် ဝိုင်းဝန်း မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက တိုင်းပြည်အတွက် နစ်နာကာ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တို့၏ အားနည်ချက်ပင် ဖြစ်မည်” ဟု သူ၏ မိန့်ခွန်းတွင် ပါရှိသည်။
သို့သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာတွင် အာဏာလွှဲပြောင်းခြင်း မပြုလုပ်လိုဘဲ စစ်အာဏာကို ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ထားလိုသူများ၊ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား မလိုက်နာဘဲ ကိုယ်ကျိုးရှာလိုသူများ၊ ဒီမိုကရေစီနည်းဖြင့် တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် မလုပ်ဆောင်ဘဲ စစ်အာဏာဖြင့် အုပ်စိုးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပျက်ပြားအောင် သွေးထိုး နေသူများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပျက်ပြားစေနိုင်သော အချက်များဖြစ်ကြောင်းလည်း ထောက်ပြ ပြောဆိုသွားသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပျက်ပြားအောင် လုပ်ဆောင်နေသော အဖျက်သမားများအား ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင် တွန်းလှန်ကာ ပန်းတိုင်ထိ ရောက်အောင် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားကြရမည် ဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ လိုလားကာ ပြည်ထောင်စုအား ချစ်မြတ်နိုးသူများ အားလုံး နောက်မဆုတ်ဘဲ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်အထိ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရန်လည်း တိုက်တွန်း ပြောဆိုသွားသည်။
SSA နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ နှစ်ဘက် ပဏာမ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ သဘောတူညီမှု ရရှိထားသော်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း၌ နှစ်ဘက်တပ်များအကြား တိုက်ပွဲပေါင်း ၄၀ ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့သေးကြောင်း သိရသည်။
မှားခဲ့သော အမှားများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်မှာ နိုင်ငံတော်၏ ကြီးလေးသည့် တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း၊ တော်လှန်ရေး အချိန်ကာလလ ကြာရှည်လာပါက ပြည်သူလူထု ပိုမို ဆင်းရဲနွမ်းပါးလာခြင်းနှင့် အခြား နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ဖိနှိပ်မှုရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး မျိုးချစ်တော်လှန်ရေး ဆိုသည်မှာလည်း ပပျောက်သွားမည် မဟုတ်ဟု ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်က ဆိုသည်။
စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုကြောင့် တော်လှန်ရေး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တော်လှန်ရေးတွင် အနုနည်း၊ အကြမ်းနည်း ထိုနည်းလမ်း နှစ်သွယ်လုံးကို ပြည်ထောင်စုသားများ အနေဖြင့် အသုံးပြု၍ တော်လှန်ခဲ့ကြကြောင်း၊ သို့သော်လည်း နိုင်ငံတော် အာဏာအား စစ်အင်အားသုံး သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် စစ်အာဏာရှင်များအား ဖြိုလှဲနိုင်မှု မရှိခြင်းကို အားနည်းချက်နှင့် ပျော့ကွက်များရှာ၍ ပြုပြင်သင့်ကြောင်းလည်း ထောက်ပြထားသည်။
စည်းလုံး ညီညွှတ်ရေးကို မျိုးချစ် တော်လှန်ရေးသမားများ သာမက ပြည်သူလူထုကလည်း အမြဲတောင်းဆိုနေကြောင်း၊ ထို့အတူ ပြည်ထောင်စုကြီး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော “ပင်လုံ” စာချုပ်ကို မေ့ထား၍ မရသကဲ့သို့ ကျော်လွှားသွား သွား၍လည်း ရမှာမဟုတ်ကြောင်း မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားသည်။
3 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website lwinhtaytunwai February 9, 2013 - 10:22 am	စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကိုပြန်အသက်သွင်းချင်နေတဲလူတွေ စစ်တပ်ထဲမှာ အများကြီးကျန်နေသေးတယ်။ နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူတွေကို စစ်အာဏာနဲ့ အုပ်ချုပ်ပြီး တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် လုပ်လို့ မရဘူးဆိုတာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကေ*********ကြီးတွေ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေအာဏာရဲ့ အရသာ၊ စည်းစိမ်ရပေါက်ရလမ်းတွေကို တက်မက်နေကြပြီး အမြဲတမ်းဖိနှိပ်ထားခြင်နေတာ။ ငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတာ သူတို့အတွက် မလုပ်ချင်ဆုံးအရာပဲ။
Reply	Okkar February 11, 2013 - 4:23 pm	Losing power will mean to them losing money. Losing money will mean to them losing mistresses. Triple loss is unimaginable to the current vampires. Power, Money and Sex.
Reply	Ko khine February 11, 2013 - 8:54 am	၁ ။ အဆိုးမြင် ၀ါဒီ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ချင်သူမျာအား ဘုံရန်သူ အဖြစ် သတ်မှတ်ချေမုန်းကြ ။
၂ ။ အဆိုမြင် စစ်ဝါဒီများအား ဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ချေမုန်းကြ ။
၃ ။ ပြည်ထောင်စုကြီး အေးချမ်း သာယာရေးအား ၀င်ရောက်နှောင့်ရှက်သူများ အား ဆန့် ကျင်ကြ ။
၄ ။ လက်နက်အားကိုး အာဏာရူးချင်သူများအား ဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ချေမုန်းကြ ။
၅ ။ တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး တိုင်းပြည်အကျိူးစီးပွားမှန်သမျှ အိပ်ထဲထည့်ချင်သူများအားဘုံရန် သူအဖြစ်သတ် မှတ်ချေမုန်းကြ ။
၆ ။ တိုင်းပြည်တည်ငြီမ်အေးချမ်းရေး အား ၀င်ရောက်နှောင့်ရှက်သူများအား ဘုံရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ချေမှန်းကြ ။
၇ ။ ပြည်ထောင်စုကြီး ထာဝစဉ် တည်သန့် ခိုင်မြဲရေး တို့ အရေး ။
၈ ။ ဖယ်ဒီရယ် ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်ပေါ်လာရေး တို့ အရေး ။
၉ ။ တိုင်းရင်းသားအားလုံး တန်းတူရေတူ အခွငိ့အရေး ရရှိ ရေး တို့အရေး ။
၁၀။ လူမျိုးဘာသာမေ၇ွး မိမိအရည်အချင်းအလိုက် ထိုက်သန့် သည့် နေရာ ၊ ရာထူးရရှိရေး တို့ အရေး ၊